Ọrụ Organic Gị Ọ Dị Ihe Dị Mkpa? | Martech Zone
Oge ka m ghafuo ụfọdụ SEO ábụ́bà ọzọ! Taa, ekpebiri m ibudata stats m na Google Search Console ma na-egwu ala na okporo ụzọ m na-enweta site na nchọta ihe. Martech Zone nwere oke dị elu n'ọtụtụ mkpụrụokwu yana ọtụtụ # 1 nọ na asọmpi dị elu, isiokwu dị elu dị elu. Anyị niile maara na ọkwa dị elu karị, nke dị elu karịa pịa-site na ọnụego na peeji nchọta ihe njin nchọta ihe. Ma nke ahụ ọ dị ihe ọ pụtara?
Emela ka nyocha ahia ahia gi na okwu ndi ị na adighi elu ma obu nke nwere obere ochicho. Na nke anyị blog ahia, 72% nke okporo ụzọ anyị na-esite na ntinye ndị dị ọbụna na peeji nke 1! Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị bụ na anyị na-enwetakwu okporo ụzọ site na ọkwa nke 8 karịa ka anyị na-eme na ogo 1!
Aghọtara m na nke a na-ekwulu Chineke, mana ịkwesịrị iche banyere nke a ka ị na-elele atụmatụ azụmaahịa ọdịnaya. Ọ dị mkpa karịa itinye ego na ogo dị elu, Keywords asọmpi siri ike? Nke a nwere ike ịbụ n'oge na ọnụ. Ma ọ bụ, ị nwere ike itinye oge na mbọ iji nye ọtụtụ ọdịnaya na isiokwu dị ogologo-ọdụ nke na-abụghị asọmpi mana ọ dị oke mkpa maka nzukọ gị?
Ikwu eziokwu, anyị ahọrọla nke abụọ. Echere m na ogo # 1 dị oke mkpa maka ọganiihu anyị. Mana achọtala m na itinyekwu ume n'ime nnukwu ọdịnaya na-eme ka anyị nwekwuo uche n'ozuzu. Ọnụọgụ adịghị agha… ebe ọnụọgụ pịa-site na ibe nsonaazụ ọchụchọ nwere ike ịbawanye ụba ka ị ruru ebe # 1, okporo ụzọ anyị dabere na ogo adịghị mkpa ihe dị ukwuu. Anyị maara na anyị nwere ike ị nweta nnukwu nsonaazụ site na nnukwu ọdịnaya… gịnị mere na ị gaghị arụ ọrụ na nke ahụ ma nwekwuo okporo ụzọ anyị na ihe dị mkpa, ọdịnaya dị mma kama ịgba égbè maka oge ọ bụla?
Mee nyocha nke onwe gị banyere ogo ogo gị. Ebee ka ọtụtụ n’ime gị okporo ụzọ na-abịa site? Ọbụna ajụjụ ka mma, olee ebe ọtụtụ n'ime gị azụmahịa na-abịa site? Echere m na ọ na-abịa site n'ọtụtụ ọdụ ogologo, ọchụchọ dị mkpa. Gwa m ihe na-ezighi ezi! 🙂
Anaghị m agbagha ọkwa dị elu na okwu asọmpi. Ọ bụ nnukwu ngosipụta nke ikike ma nwee ike ịchụpụ ọtụtụ okporo ụzọ. Nakwa, ogo elu na ụfọdụ Keywords yiri ka ọ na-agbakọ na ogo dị elu na ọtụtụ isiokwu metụtara ya. Nchikota nwere ike ime ka onu ogugu ahia. Naanị m na-akwado usoro ziri ezi. Kama ịnwa inweta homerun na bat ọ bụla, ọ dị mma oge ọ bụla iji nwaa ịdabere!
Nwelite: Mgbe m kesara ọkwa a, achọpụtara m na abụghị m naanị onye hụrụ nke a Chase Traffic, Ọ bụghị ọkwa.
Tags: ctrgoogle ogogoogle +isiokwu n'usoroogologokeytail isiokwupeeji nkeogoagwo
Dec 28, 2011 na 4:59 PM
Nke a bụ ezigbo ezigbo post Doug. Ndị nwoke na-agha ụgha, Womenmụ nwanyị na-agha ụgha, Ọnụ ọgụgụ adịghị. Yabụ na ọnụọgụgụ gị, aga m asị na ịnọ ebe ị ga - ahụ - ma nke ka mkpa, ụlọ ọrụ na - abụghị ndị ahịa na - eche ihu kwesiri ịtụle usoro a. M na-abata n'ọfịs ụbọchị ole na ole n'izu na-abịa ma na-arụ ọrụ - Ọ ga-amasị m igwu omimi na nke a. (PS: Adị m izu 2 ka m mụta ihe na teamtreehouse.com. Bofọdụ ndị mmadụ kpebiri ịmụ ka ha dee koodu nke ya. Mee ka Maazị Coley mara!
Renaud JOLY kwuru
Dee 29, 2011 na 8: 03 AM
Ikike na mmetụta na isiokwu ndị metụtara ya dị ezigbo mkpa. Cheta na Google Webmaster Ngwaọrụ na-egosiputa naanị akụkụ nke ogo (1,000 Keywords).
Dec 29, 2011 na 7:39 PM
Ya mere, ọdịnaya a nwere adwords ndị ejikọrọ na ya? Yabụ ị na-enweta ụgwọ ọrụ site na adwords na ndepụta ndepụta ahụ pụtara. Echere m na adwords na-eme nke ọma mgbe ha bụ ndepụta aha kwekọrọ. Nyere ndị mmadụ nhọrọ ga - pịa ntinye ego (mgbe a na - ahụ nke ọzọ anya) nke a na - akpata adwords ka ọ bụrụ isi iyi okporo ụzọ na ọnụọgụ ga - ese ihe dị ka ihe na - adịghị mkpa mana eziokwu bụ na CTR gaara adị ala ma ọ bụrụ na etinyeghị ihe ndị ahụ.
Great echiche egwu post.
Dec 29, 2011 na 7:49 PM
@ktatgenhorst: disqus Nope, anyị anaghị eme nyocha ọ bụla akwụ ụgwọ iji nweta okporo ụzọ.
Dec 30, 2011 na 2:52 PM
Doug, ndụmọdụ ikpeazụ gị, ịchụ okporo ụzọ, ọ bụghị ọkwa bụ ihe ọtụtụ mmadụ anaghị enweta. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na ọ bụ n'ihi na ọkwa dị mfe, okporo ụzọ siri ike na ntụgharị, ọ bụrụ na ịpịtara aka, na-eduga ma ọ bụ ire ahịa ka sie ike.
Aha ya bụ Hirsch
Ndewo Doug, enwere m mmasị na post a mana enwere m nkọwa banyere nkọwa gị maka ọkwa SERP maka edemede a. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị bụ na Google SERP ịhazi onwe gị emeela nkọwa zuru oke nke Google "ogo" adịghị mkpa, nkọwa nkọwa nke ogo ka ị na-eji maka ọmụmụ ihe a? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-azọrọ na 72% nke okporo ụzọ gị na-abịa site na isiokwu ị na-anaghị akwụ ụgwọ maka peeji nke 1 nke Google SERPs, mana ọ bụrụ na onye ọ bụla ahaziri ya, onye bụ Google SERPs ị na-ekwu? * Onye * na - achọta blog gị maka isiokwu ndị ahụ, ọ dị mma? Na ohere ha na-achọ na peeji nke 2,3,4 wdg nke Google SERPs dị ala. Yabụ maka ha, ARE nọ na ibe 1, ma ọ bụrụ na ha agaghị ahụ gị n'ọtụtụ ọnụọgụ ị na-ekwu maka ya.
N'ezie, nke ahụ abụghị ikpe Tod. Dị ka isiokwu na-egosi, imirikiti okporo ụzọ ọchụchọ m na-enweta anaghị B coming abịa site na ntinye m na ibe mbụ. Isi okwu m abụghị na ogo ahụ abụghị ihe dị mkpa…. ihe m kwuru bụ na ANAKWETA dị mkpa karịa ọkwa. Ọ bụrụ n’ị lekwasị anya na ọdịnaya gị ma dee nnukwu ọdịnaya, ndị mmadụ ga-achọta gị. N'agbanyeghị ogo.
Anyị na ndị ahịa anyị na-ahụkwa nke a. Olu dị elu, isiokwu dị elu dị elu na-ebugharị ụfọdụ okporo ụzọ mana ọ bụghị ntụgharị. Ntughari na-abịa site na peeji ndị dị oke mkpa na posts sitere na isiokwu dị ogologo-ọdụ sitere na ntinye SERP na mpụga nke ibe mbụ. Ọzọkwa, mkpa karịa ọkwa.
Doug, ederede gị doro anya na 72% nke okporo ụzọ gị B NOTGH coming na-abịa site na ajụjụ ebe ị kwụ na Page 1 nke SERPs. Ajuju m di karia banyere "ogo" na oge nke SERP nke onwe. 72% nke okporo ụzọ ọchụchọ ọchụchọ gị hụrụ gị… n'ụzọ ụfọdụ. Kedu ka ha si achọta gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ọkwa na Page 1 maka ajụjụ ndị ahụ? Nhazi nke onwe nke SERP abiala na ibe onye obula di oke iche?
Ruo n'ókè… offọdụ ndị ahịa anyị na-ahụ ọkara nleta site na nchọta ahaziri iche. Mana nke a abụghị nchọta ahaziri iche… data a sitere na Webmasters. Nke a bụ ndị na-ada peeji 1 gara aga na-achọ nsonaazụ RELEVANT.
Anọ m na-eche mgbe niile na mgbe ndị mmadụ na-achọtaghị ihe ha chọrọ na Page 1, ha na-ajụ ajụjụ ọzọ, na-ajụ ajụjụ ahụ n'ụzọ dị iche, karịa ịga na peeji nke 2. Nke ahụ bụ ihe m na-anụ mgbe niile ma banye na ya eziokwu nke ahụ bụ ihe m na-eme mgbe niile. Ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu, omume ọchụchọ ndị mmadụ na-agbanwe kpamkpam.
Tod - nke ahụ bụ otu m si eme ọchụchọ. Mana ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ juru m anya etu ndị ọzọ si achọ. Iji maa atụ: Ọtụtụ, ọtụtụ, ọtụtụ mmadụ na-etinye okwu ahịrịokwu niile na igwe nchọta ozi karịa mkpụrụ okwu ole na ole. Anyị na ndị ahịa anyị arụ ọrụ na imepụta Ajụjụ ndị na-ewepụta ọtụtụ ọchụchọ. Onye maara?!
Doug, M n'ezie na-amasị isiokwu. My mantra mgbe niile ahịa mbụ ọdịnaya nke abụọ. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị na-arịọ ndị ahịa gị mgbe niile, ha ga-ahụ gị.
Imirikiti okporo ụzọ m na-abịa site na ogidi nke edere m ọtụtụ afọ gara aga. Ogologo ọdụ ahụ na-enye m okporo ụzọ okporo ụzọ kwa ụbọchị. Okwu ahụ bụ "ogidi post" ka emetụtakarị oge. Mgbe m kwuru “ogidi post” m na-ekwu ede bonafied mbụ ọdịnaya na bụ mkpa ka m na saịtị niche na jupụta a ezigbo mkpa ka obodo. Ọ bụghị naanị idozi ọdịnaya ka ụfọdụ na-eme. Bụ onye mbụ mejupụtara ya chọrọ m ọdịnaya Googebot dị ka ikike na isiokwu ahụ.
Daalụ @ blogbloke: disqus! Mgbe niile dị mma iji nweta otuto site n'aka ndị ọsụ ụzọ. 🙂